Dhismaha - Sichuan Aixiang Technology Co., ltd.
Waxaan China ku haynaa 30 shaqaale dhisme ah. Isla mar ahaantaana, waxaan Mareykanka ku leenahay kooxda dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo oo joogto ah.
Sannado badan oo waayo -aragnimo shaqo ah oo lagu koriyo, Naqshadeynta aqalka dhirta lagu koriyo waa mid aad u jaango'an, sidaa darteed shaqaaluhu waxay awood u leeyihiin dhismaha habab badan, sidoo kale waxay si fiican u dhammaystiri karaan hababkaas.
Iyada oo ay iskaashanayaan 4 shaqaale, aqalka dhirta lagu koriyo ee tunnel ballaciisu yahay 10 mitir iyo dhererka 40 mitir ayaa qaatay 5 maalmood in la dhammaystiro dhismaha.
Laga bilaabo marka maaddadu timaaddo illaa la wareejiyo macmiilka. Dhammaanteen waxaan leenahay saddex tallaabo si loo hubiyo tayada dhismaha.
Markay alaabtu timaaddo goobta, waxaan tijaabin doonnaa tayada iyo tirada agabka si aan u hubinno habsami u socodka mashruuca Foomka xaqiijinta ayaa markaa la siiyaa macaamilka si uu u saxiixo oo u xaqiijiyo.
Kadib, hab dhisme kasta wuxuu leeyahay kormeer, dhisid, iyo xaqiijin macmiil.
Marka dhammaan mashaariicda la dhammaystiro, macmiilku wuxuu u baahan yahay inuu tijaabiyo aqalka dhirta lagu koriyo ilaa macaamilku ku qanco, ka dibna saxeexo bixinta.
Waxaad ogaan kartaa in macaamiishu ay ku lug leeyihiin geedi socodka dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo oo dhan. Tani waxay hubineysaa tayada aqalka dhirta lagu koriyo.
Haddii aad ku mashquulsan tahay ka -qaybgalka dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo. Ha welwelin. Gurigeena koriinka ah waxay bixisaa adeeg dammaanad.
Bixinta adeegyada dhismaha ma aha oo kaliya dhisidda aqalka dhirta lagu koriyo. Waxa kale oo ay siisaa macaamiisha waayo -aragnimo aqalka dhirta lagu koriyo oo wanaagsan.
Injineernimada madaniga ah
Qaab dhismeedka birta fudud
EE GREENHOUSE -kaaga
»Dhismaha aqalka dhirta lagu koriyo
»Kor -u -qaadista Greenhouse -ka
»Dayactirka aqalka dhirta lagu koriyo
»Rakibaadda qalabka Greenhouse
U dhis guryaha lagu koriyo si waafaqsan shuruudaha macmiilka
Ogow horumarka mashruuca mar kasta iyo meel kasta adoo adeegsanaya taleefanka gacanta
Muddada dhismaha oo gaagaaban
Hawlo badan oo faan badan si loo saxo khaladka
Aqalka dhirta lagu koriyo oo caqli badan
HADDII aad u baahan tahay adeeg kor ku xusan, pls waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto!